Su&#39;aalaha badanaa la isweydiiyo | Sapsa
Hoos waxaa ku qoran su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan nolosha Dugsiga Hoose ee St. Anthony Park. Waxaan rajeyneynaa in boggan uu kuu ahaan doono ilo kuu ahaan doona!
Waxaan ku talinaynaa in dugsiga iyo kalkaalisada taleefoonkooda la geliyo xiriirada taleefankaaga!
Telefoonka Dugsiga: 651-293-8735
Kalkaaliyaha Dugsiga: 651-888-7662
Telefoonka Naadiga Discovery: 651-293-5332
Xiriirada iimaylka ee muhiimka ah:
Maamulaha, Dr. Karen Duke iimayl: karen.duke@spps.org
Karaaniga dugsiga, Michele Brinkhaus iimayl: michele.brinkhaus@spps.org
Waxyaalaha Farsamada Degmada
iUpdate/Xiriirka OneStop: https://www.spps.org/onestop
Xiriirka Schoology: https://schoology.spps.org/home
Taariikhaha & Wakhtiyada
Maalinta iskuulku wuxuu bilaabmaa 7:30 AM. Albaabadu waxay furan yihiin 7:15 AM.
Maalinta dugsigu waxay dhammaanaysaa 2PM.
Fasalada 1-5 waxay bilaabanayaan fasalada khamiista, 9ka Sebtembar.
Xannaanadu waxay bilaabaan xiisadaha Isniinta, 13ka Sebtembar.
Jadwalka Dugsiga Buuxa: https://www.sapsamn.org/upcoming-events
Ardaydu waxay ku yimaadaan iskuulka iyagoo lugeynaya, baaskiil wadaya, soo dejinta waalidka iyo basaska! Subaxdii iyo galabtii aad bay mashquul ugu yihiin agagaarka dugsiga. markaa fadlan taxaddar dheeraad ah ka samee agagaarka aagga nabadgelyada ardaydeena.
Ardaygaaga ma ka tagaysaa? Fadlan raac tilmaamahan.
Ardaygaagu ma raacayaa baska? Fadlan booqo boggan wixii macluumaad dheeraad ah .
Ma la yaabban tahay haddii baska ardaygaagu wakhtigiisii yahay? Fadlan booqo halkan wixii macluumaad dheeraad ah .
Kafeega Dugsiga & Cuntooyinka
Qadada iyo quraacdu waa u bilaash dhammaan ardayda sanad dugsiyeedka 2021-22. Dugsiyada/barnaamijyada gaarka ah ayaa go'aamin doona haddii cuntada lagu bixin doono maqaaxiyaha iyo/ama fasallada. Ardayda iyo shaqaalaha waxaa laga rabaa inay xirtaan maaskaro marka aysan wax cunayn ama cabin. Fadhiga loo qoondeeyey ayaa loo baahan doonaa inta lagu jiro cuntada.
Quraacda Go ayaa sii socon doonta, iyada oo cuntooyinka horay loo soo baakadeeyay lagu cuno fasalka dhexdiisa. Qadada waxaa lagu bixin doonaa weelal dib loo isticmaali karo oo dabool leh halkii lagu siin lahaa baakooyinkii qadada ee caadiga ahaa, iyo miisaska miiska ayaa calaamadeyn doona goobaha fadhiga ee makhaayadaha. Shaqaaluhu waxay la socon doonaan borotokoollada badbaadada inta lagu jiro xilliga qadada, oo ay ku jiraan safka iyo eriga.
Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul waxay u isticmaalaan Kafeega Dugsiga ( www.schoolcafe.com ) ilaha koowaad ee qadada dugsiga.
Fadlan u samee koonto qoyskaaga oo buuxi codsiga faa'iidooyinka arday kasta oo qoyskaaga ah. Tani waa muhiim, xitaa haddii aad diidi doonto faa'iidooyinka! Waxay ka caawisaa degmo dugsiyeedka inay go'aamiyaan baahiyaha dhabta ah ee dugsigeenna waxaanan u baahannahay in qoys walba ka jawaabo. Codsigan waxaa lagu turjumi karaa Isbaanish, Soomaali ama Hmong iyadoo la adeegsanayo hoos u dhaca bogga arjiga.
Ka dooro St. Anthony Park Elementary hoose hoos -u -dhaca si aad u aragto Liiska iskuulku waa https://www.schoolcafe.com/menus
Liiska 2021-2022 ee Dugsiga Hoose ee St. Anthony Park Elementary ayaa laga heli karaa HALKAN .
Sannad caadi ah, oo aan ahayn sannadka Covid waxaa jira dhowr barnaamijyo dugsi kadib iyo xulashooyin daryeel oo ay heli karaan qoysasku. Fadlan ka hubi xaaladda barnaamij kasta xiriiriyeyaasha hoose.
Discovery Club-daryeelka dugsiga kadib oo lacag lagu bixiyo ee St. Anthony Park Elementary. Riix halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah
Daryeelka Carruurta ee SAP-lacag-bixin, dheel-dheel u ah xannaanada carruurta ee carruurta ka weyn ee Kaniisadda Methodist Centennial ee Hillside iyo North Knapp. Riix halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah
Baaritaanka Langford Park Rec-daryeel dugsi kadib oo bilaash ah Xarunta Madadaalada ee Langford Park. Diiwaangelinta kaliya. Riix halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah​ .
Waxbarashada Bulshada-fasalo iyo waxqabadyo dugsi kadib la bixiyo. Online kaliya dayrta 2021. Halkan guji si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Barashada Maalinta Dheeraad ah (EDL) - barashada dugsiga kadib oo lacag la'aan ah macallimiinta St. Anthony Park. Riix halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah
MACLUUMAADKA PROTOCOL COVID
SPPS waxay u baahan doontaa dhammaan waji -xidhka dhammaan macallimiinta, shaqaalaha, ardayda iyo booqdayaasha (da'doodu tahay 2 iyo ka weyn) dhammaan dhismayaasha SPPS, iyada oo aan loo eegin xaaladda tallaalka qofka, haddii aysan haysan ka -reebitaan u qalma. Tan waxaa ku jiri doona fasallada waxbarashada jirdhiska ee gudaha iyo waqtiyada cuntada marka aan la cunin ama la cabbin. Maaskaro ayaa sidoo kale looga baahan yahay basaska dugsiga. Guud ahaan, dadku uma baahna inay xirtaan maaskaro bannaanka (tusaale nasashada).
Ardayda waxaa si weyn loogu dhiirigelinayaa inay maalin walba dugsiga keenaan maaskaro nadiif ah oo si fiican u habboon, oo ay ku jiraan kuwa dheeraadka ah. Maaskaro la tuuri karo ayaa laga heli karaa dhammaan dugsiyada iyo basaska haddii loo baahdo.
Waxaan siin doonaa 3 fuudh ama ka badan oo kala durugsan halka ay suurtogal tahay inta u dhaxaysa ardayda, iyo 6 cagood oo u dhexeeya shaqaalaha iyo ardayda. Fasallada qolka guriga ayaa wada joogi doona maalinta oo dhan mana ku biiri doonaan kooxaha kale xilliga fasaxa, hoolalka, qolka qadada, ama meelo kale. Ma qaban doonno shirar koox-kooxeed ama kulanno fasallo badan ah. . Jidadka marinka ayaa la qorshayn doonaa oo la isku duwi doonaa si loo yareeyo gudbinta fasallada ee waddooyinka, iyo nasashada qolka fasalka oo dhan ayaa la qorsheyn doonaa.
Booqdayaasha dhismaha dugsiga aad bay u xadidnaan doonaan. Kulammada qof ahaaneed iyo ballamaha macallimiinta ama shaqaalaha waxaa lagu heli karaa ballan keliya. Markay suurtogal tahay, waxaan qaban doonnaa shirar iyadoo la adeegsanayo aaladaha dalwaddu sida Google Meet. Xubnaha qoysku ma keeni karaan ardayda fasallada subaxdii. Waxaan dibadda u haysan doonnaa shaqaale ka caawiya ardayda inay gudaha galaan oo ay bilaabaan maalinta. Marka sannadku bilaabmo oo la sameeyo hab -raacyo joogto ah, waxaan sahamin doonnaa inaan siinno fursado xaddidan xubnaha qoyska si ay ugu tabarucaan dugsiga.
Hanaanka Ardayda Xanuunsan
Ardayda xanuunsata ama muujiya astaamaha COVID-19 inta lagu jiro maalinta iskuulka waxaa lagu karantiili doonaa “Qolka Sugitaanka” (oo ay kormeerayaan kaaliyaha caafimaadkeena) ilaa laga soo qaado. Waxaa muhiim ah inaad sida ugu dhakhsaha badan u soo qaadato ardayda jirran si aad ugu koobto halista dadka kale.
Tijaabinta COVID-19 ayaa si gaar ah qiimo ugu leh aagagga ay ka jiraan heerar aad u sarreeya oo gudbinta bulshada iyo meelaha leh tallaal hooseeya.
SPPS waxay la shaqeyneysaa MDH iyo ururada maxalliga ah si ay ardayda u siiso xulashooyin imtixaan oo dheeraad ah. Macluumaadkan waa la cusboonaysiin doonaa marka la helo hagid cusub. Goobaha Imtixaanka Minnesota halkan: https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp
SPPS waxay raacdaa tilmaamaha Waaxda Caafimaadka ee MN marka arday, xubin shaqaale ama booqde ay soo sheegaan kiis togan oo COVID ah. “Xiriir dhow” ayaa lagu qeexi doonaa inuu ku dhex jiro 6 ’15 daqiiqo oo isugeyn ah 24 saac gudahood. Haddii kiisas badan laga soo sheego gudaha fasalka dhexdiisa ama dugsiga, fasalka oo dhan ama dugsiga ayaa laga yaabaa in la karantiilo. Waaxda Caafimaadka iyo Fayo -qabka Ardayga ee SPPS waxay la shaqayn doontaa maamulaha iyo kalkaalisada dugsiga si loo dhammaystiro raadinta xiriirka iyo isgaarsiinta sida loo baahdo. SPPS waxay diyaarisay hab -maamuus isgaarsiineed si loo go'aamiyo cidda lagu wargeliyo xaaladaha kala duwan.
U adeegso nidaamkan si aad u soo sheegto astaamaha COVID-19, tijaabo togan oo loogu talagalay COVID-19 ama xiriir dhow oo lala yeesho qof qaba COVID-19 sanadka oo dhan: https://commedspps.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9G0WvcJlWfuqwlL
Iyadoo la raacayo tilmaamaha caafimaadka dadweynaha ee la cusboonaysiiyay, SPPS waxay yaraysay waqtiga karantiilnimada oo ahayd 14 maalmood ilaa 10 maalmood xaalado gaar ah. Qofka waxaa laga rabaa inuu karantiil yeesho haddii uu xiriir dhow la lahaa qof qaba COVID, haddii labadoodaba aysan wejiga u duubnayn, iyo haddii aan la tallaalin. Afar iyo toban maalmood oo karantiil ayaa weli loo baahan yahay marka qof ka tirsan qoyskaaga uu leeyahay astaamo ama laga helay COVID-19, haddii aan lagu tallaalin. Kalkaaliyaha caafimaad ee dugsigeena ayaa kaala talin kara karantiilinta.
Sanadkii la soo dhaafay, Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul waxay hagaajiyeen tayada hawo -qaadka dhammaan dhismayaasha. Qalabkayaga hawo -qabadka hawadu wuxuu siiyaa hawo bannaanka ah meelaha bannaan ee la haysto sida fasallada, xafiisyada, goobaha jimicsiga, kafateeriyada iyo hoolka si loo ilaaliyo tayada hawada gudaha iyo raaxada wanaagsan. Qalabka maaraynta hawada waxaa la maamulaa ugu yaraan hal saac ka hor inta aan la degin maalin kasta si loo sii banneeyo dhismayaasha. Xilliga cimilada kulul, shaqaalaha hawada ayaa sidoo kale la qalaa habeenkii si ay gacan uga geystaan qaboojinta dhismaha. Nadiifiyeyaasha hawada HEPA oo kali ah ayaa loo isticmaalaa qolal ay kooxda tayada hawada SPPS ku cabbireen heerka hoose ee socodka hawada.
Jeermiska iyo Nadiifinta
Iyada oo la adeegsanayo jeermis-dilaha EPA ee SARS-CoV-2, shaqaalaha ilaalintu waxay si joogto ah u tirtiri doonaan oo jeermiska u siin doonaan meelaha iyo meelaha taabashada sare leh sida weelal-biyoodka, ilaha cabbitaanka, gacmaha albaabka, miisaska iyo miisaska dhismahayaga oo dhan. Waxaan sidoo kale siin doonaa fursad aad u weyn oo ah qalabka nadiifinta macallimiintayada iyo shaqaalaha si ay u nadiifiyaan oo jeermis ugu yeeshaan meelaha, hadba sida loogu baahdo.
Nadaafadda iyo Gacmo -dhaqashada
Jadwalka nadaafadda gacmaha ayaa lagu dhisi doonaa jadwalka maalinlaha ah ee dhammaan ardayda iyo shaqaalaha, oo ay ku jiraan cuntada ka hor iyo ka dib, isticmaalka musqusha, nasashada, imaanshaha iyo ka saaridda. Helitaanka saxammada iyo musqulaha ayaa la yareeyn doonaa si loo yareeyo isu -imaatinka aagga musqusha. Gacmo nadiifiye ayaa la siin doonaa ardayda, laakiin adeegsiga gacmo nadiifiye kasta waa la ilaalin doonaa. Nadiifiyaha waxaa laga fogeynayaa meel aan la gaari karin marka aan la isticmaalin.
Dhalooyinka biyaha ayaa la siin doonaa dhammaan ardayda si loo yareeyo isticmaalka ilaha biyaha.
Gudaha gobolka, safaro maalmeed ayaa la oggolaan doonaa. Lama oggola socdaal ka baxsan gobolka, habeen ama safaro caalami ah waqtigan. Como Planetarium waxaa heli doona ardayda SPPS oo kaliya.
Fadlan ku calaamadee jaakadaha, koofiyadaha, koofiyadaha, dhalooyinka biyaha, sanduuqyada qadada oo leh magaca ilmahaaga oo leh sumad joogto ah.
Mutadawiciinteennu waxay si geesinimo leh isugu dayaan inay alaabtii luntay la midoobaan milkiilayaashooda, laakiin waa hawl Herculean ah. Ugu dambayn waa inaan ku deeqnaa ama tuurnaa alaabta sannad kasta. Fadlan calaamadee alaabta. Waxay samaysaa saamayn weyn!
Fadlan ku soo sheeg astaamaha COVID-19, tijaabo togan oo COVID-19 ama soo-gaadhista dhow ee qof qaba COVID-19 halkan.